बढ्दो सडक दुर्घटना, न्यूनीकरणमा चुनौती | Samacharpati बढ्दो सडक दुर्घटना, न्यूनीकरणमा चुनौती – Samacharpati
गैँडाकोट नवलपुर , ७ असोज । पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाका घटनाले गर्दा अकालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या भयाबह रुपमा बढेको छ। नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक रूपमा ७ जनाको ज्यान जाने गरेको बिगतका सरकारका तथ्यांकले बताउँछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सन् २०१३ देखि २०२० सम्ममा सडक दुर्घटना ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना बनाएको थियो। तर सरकारको कार्ययोजनाको प्रभावकारीता भने देखिएन। सडक दुर्घटना घटाउने ८ बर्षे लक्ष्यमा अहिलेसम्म कति प्रतिशत दुर्घटना घट्यो भन्ने यकिन डाटा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैसँग छैन भने बढ्दो सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्कले पनि मन्त्रालयको कार्ययोजना कति प्रभाबकारी रह्यो भन्ने प्रष्टै पार्दछ। सडक सुरक्षा गर्ने पहिलो र प्रमुख दायित्व सरकारको हो। पूर्वाधार अनुसार सडक निर्माण भएको छ छैन ? सडक गुणस्तरीय र यात्रा सुरक्षित छ छैन ? सबारीचालक दक्ष र सबारी साधनको अवस्था कस्तो छ ? के सडकमा गुड्ने सबै सबारी साधन योग्य छन ? के सबै सबारीचालक सडकको लेन र ट्राफिक नियमको पालना गरेका छन ? त्यसको सम्पूर्ण हिस्सा हेर्ने जिम्मेबारी राज्य शक्तिको हुन्छ। बार्षिक रिपोर्टहरूमा सडक निर्माण सम्पन्न भएका तथ्यांकहरू बढेको देखेर बिकास र समृद्धी आयो भन्नु मुर्खता हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा दैनिक १३ जनाको सडक दुर्घटनाबाट अकालमा मृत्यु र दर्जनौँ घाईते हुनुपरेको तथ्यांक सार्बजनिक गरेको छ। यहि तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बार्षिक ४७४५ संख्या हुन आउँछ । देशमा अहिले ३ तहका सरकार छन्। तर सडक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन कानून पुरानै छन्। विद्यमान कानून अद्यावधिक भएका छैनन् भने कतै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। २७ बर्ष अगाडि बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २२ बर्ष अगाडी बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ का आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ , जुन समयसापेक्ष छैन। झण्डै आधा करोडको हाराहारीमा सबारी साधनहरू दर्ता भैसकेको अवस्था छ। सबारी संख्याको दरमा बढ्नुपर्ने सडकका पूर्वाधार, सबारी चेतना, सडक र सबारीका सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक कुराको चेतना भने खस्किँदो अवस्था छ।
सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण सबारी चालकको लापरवाही नै हो। यसमा द्धिमत छैन्। सरकारका केही पछिल्ला तथ्यांकहरू पल्टाउँदा पनि चालकको लापरवाहीमा ७२ प्रतिशत, तीब्र गतिमा चलाउँदा १८ प्रतिशत, मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउदा २ प्रतिशत, क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेका कारण एक प्रतिशत, जोखिमयुक्त सवारी साधनमा १ प्रतिशत, पैदल यात्रीका कारण १ प्रतिशत, कमसल सडक १ प्रतिशत र अन्य कारणले ४ प्रतिशत दुर्घटना भएका छन्। अचेल आठ दश जनाको सडक दुर्घटनामा ज्यान नगुमेको दिन सायदै भेट्न मुस्किल पर्ला। एक दुई जनाको मृत्युको समाचार सबैलाई सामान्य हुन थाल्यो। त्यसले खासै चर्चा पाउन छाड्यो र यि समाचार सामान्य बन्दैछन्। दिनानुदिन यसरी सबारी दुर्घटना बढेकोले घरबाट हाँसीखुशी हिडेको व्यक्ति बेलुका गन्तव्यमा पुग्ने नपुग्ने र सकुसल घर फिर्ने नफिर्ने बारेमा बढ्दो सन्त्रास छ। सवारी साधनमा सिट पाउने, सबारी राम्रो अवस्थाको पाउने भन्दा पनि विस्तारै जनमानसमा सकुशल घर पुग्नु नै ठूलो सपना हुँदैछ। हालका ठूला सडक दुर्घटना र तिनैबाट सृजित परिणामहरूले गर्दा यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि मेरो यात्रा र काम कत्तिको आवश्यकता छ र नतिजामुखी भनेर सोचेर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।सामान्य भेटघाटकै लागी सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण बन्दै गएको पछिल्ला सडक दुर्घटनाहरूले प्रष्ट पार्दछ।
सडक दुर्घटनाको प्रमुख जिम्मेवार निकाय सरकार र सडक बिभाग नै हो।सडक बनाउने जिम्मा सडक बिभागको हो। सडकको दुरावस्थाले गर्दा हुने अत्यधिक सवारी दुर्घटनाले अकालमा कैयौँको मृत्यु भएको अवस्था छ। पुराना सडकहरू समयमै निर्माण हुँदैनन्।नयाँ निर्माण भएका सडकहरू कमसल कच्चा पदार्थ र ठेकेदारको लापरवाहीले ४-६ महिना पनि टिकाउन हम्मे हुन्छ। समयमै ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न गर्दैनन्। बजेट सकाउनकै लागी काम हुन्छ। यथार्थपरक उद्देश्य पूर्तिका लागी काम गरिदैन। अनुगमन हुँदैन। फितलो ऐन नियम र कानूनको उपहास गर्दे बिना मियोको दाँई लगाएर चल्ने देशमा हामी जनताले कहिले सम्म सरकार र जिम्मेवार निकायको मुख हेरेर बस्ने? हामी उच्चस्तरीय, बिलासी तथा आधुनिक साधनहरुको प्रयोगको नाममा सडक दुर्घटनाको शिकार भएका छौँ। त्यसैले सडक दुर्घटना पूर्ण रुपमा हटाउन नसके पनि यसको निराकरण उपायहरु अपनाउन सकिन्छ। तपाई हामी जहाँ छौँ जस्तो अबस्थामा छौँ त्यही बाट आबाज उठाऔँ र खबरदारी गरौँ हैन भने हाम्रो अमूल्य जीवन क्षणभरमै विलिन हुने भयाबह अबस्था हाम्रो अगाडि छ। त्यसलाई नकार्न भने सकिन्न।
गैँडाकोट न.पा. २
क्षत्री समाज नेपालद्धारा एमसीसीको बिरोध
Redmi9Power with an eye-Captivating Design, Tremendous Battery life Launching Soon in Nepal